အမေရိကန် မှ Sanctions ရုတ်ပြီ ~ မျိုးချစ်သူရဲကောင်းများ
Posted by မျိုးချစ်သူရဲကောင်းများ On 7:18 PM0comments
"ယခုအချိန်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ရေနံနဲ့ ဓါတ်ငွေ့ကုမဏီတွေ၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ သတ္ထုတူးဖော်ရေး ကုမဏီတွေ၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမဏီတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဒီကုမဏီတွေ အပြန် အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို စိတ်ကြိုက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။"
"ဒါ့ကြောင့်မို့ အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ကျွန်မ ပြောကြား လိုက် ပါတယ်။ အမေရိကန်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အထွေထွေခွင့်ပြုမိန့် တစ်ရပ် ကျွန်မတို့ ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထုတ်ပေး လိုက်ခြင်း အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေ ဟာ နိုင်ငံတကာငွေးကြေးဈေး ကွက်တွေ၊ ဒေါ်လာ အခြေပြု ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေကို ဆောင် ရွက်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ကြပါ၊ တာဝန်ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါ၊ ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကို ကိုယ်စားပြုပေးကြပါ၊ Good Corporate Citizen တွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးကြပါ၊ ကျွန်မတို့အားလုံး အတူတစ်ကွ လက်တွဲပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလုပ်အကိုင်တွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးကြ ပါစို့၊ မြန်မာနိုင် ငံပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုတွေ ကို ထောက်ပံ့ ကူညီကြ ပါစို့ လို့ ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုပါတယ်။"
From : UDP
Sanctions တွေ ပိတ်ဆို. တားဆီမှုတွေ ရပ်ကုန်ပြီး လှမ်ကုန်ပြီ-- ရုပ်ကုန်ပြီ- အသံကုန်အောင် အားကျယ်ကျယ်နဲ. တားဆီးပိတ်ဆို.မှုတွေ လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်အောင် စည်းရုံးသူတွေအပေါ် မြန်မာပြည်သူတွေ အောင် ပွဲ ရလိုက်ခြင်းပါ။
Today We can say American Business, Invest in Burma and Do it responsibly ဆိုပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဒေါ်ကလင်တန်က တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ အမေရိကန်အနေဖြင့် မြန်မာ ပြည်အပေါ် ပိတ်ပင် တားဆီမှုတွေကို ဒီထက်လျော့ပေးသင့်တယ် ပိုပြီး လုပ်ပေးသင့်တယ် လုပ်ဖို. လိုတယ်လို.လည်း အထက်လွတ်တော်အမတ် Senator Jim Webb ကလည်း အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မူဝါဒအပြောင်းအလဲကို မှတ်ချက် ပေးခဲ့ပါသည်။
Sanction တွေကို ရပ်နား ရပ်ဆိုင်းတာမျိုး Suspend လုပ်တာထက် မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးကို ရှေ.တန်းတင်သူတွေကတော့ လုံးဝ ရုပ်သိမ်းတာမျိုး ပဲဖျက်တာမျိုးကို လိုလာတာ အမှန်ပါ။
အမေရိကန်ရဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မူဝါဒအပြောင်းအလဲကို လက်မခံသူ ဖေ၀န်သူ ကန်.ကွက်သူတွေကတော့ မြန်မာပြည် အကြောင်းပြပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသဖွယ် လုပ်စား ပြစားတဲ့ US Campaign For Burma လိုအဖွဲ.တွေ. UK Burma Campaign လိုအဖွဲ.တွေနဲ. အာဆီယမ် အမတ် တချိုနဲ. ဖွဲ.ထားတဲ့ ဆန်.ကျင် ဝေဖန်ရေး လေကန်ရေး သမားတွေ လောက်ပဲ ဆူညံ ပူညံနဲ. အသံတွေ ထွက်လာတာပါ။
အာဆီယမ်အမတ်အဖွဲ. ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား အမတ် အမျိုးသမီးကို မေးချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်မှာ လူ.အခွင့်အရေးမရှိသေးဘူး တိုင်းရင်းသား တန်းတူ မရှိသေးလို. စီးပွားရေး ပိတ်ဆို.မှုတွေ ဆက်ပြီး လုပ်သင့်တယ်လို. အော်နေတာမို. ---အဲဒီ အမျိုးသမီး အင်ဒိုနီးရှားအမတ်အနေဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရော ဘယ်လောက်များ လူ.အခွင့်အရေးနဲ. တန်းတူညီမျှရေးတွေ ရှိနေပြီမို.လည်း။ အာချေးသားတွေနဲ. အာချေး ပြည်သူတွေရော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ လူ.အခွင့်အရေးနဲ. တန်းတူညီမျှမှုတွေ ရှိနေပြီလား-- ဒါကြောင့် အဲဒီ အမတ်အနေဖြင့် မြန်မာပြည် ကိစ္စကို ထားလိုက်ပါဦး အရင်ဆုံး အင်ဒိုနီးရှားမှာ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် လူ.အခွင့်အရေးတွေ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတွေနှင့် လာဒ်ပေး လာဒ်ယူ မှုတွေ ပျောက်သွားအောင် အရင် လုပ်လိုက်စမ်းပါ--- မြန်မာပြည်က ခင်ဗျားအတွက် ဝေးပါသေးတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို.မှုတွေကို ရပ်တန်.ဖို. Suspend လုပ်ဖို. ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြိုဆိုပါသည်။
Today We can say Myanmar Reformists, Do it as you plan and Go ahead as you start.